မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံတစ်ကျော့ပြန်ရယူမှုအတွက် ကစားသမားတွေ တွစ်တာမှာ ပွဲခံ – Sports A2Z
မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံတစ်ကျော့ပြန်ရယူမှုအတွက် ကစားသမားတွေ တွစ်တာမှာ ပွဲခံ
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံအဖြစ် အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ နှောင့်နှေးနေခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ပိုင်းပွဲ ရလဒ်တွေကြောင့် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရမှုတွေဟာ ဒီနေ့မှာတော့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲနဲ့အတူ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီအတွက် ဆုဖလားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တချို့ကတော့ အစ်တီဟတ်ကွင်းရဲ့ အပြင်မှာ စောင့်ဆိုင်းပြီး အောင်ပွဲခံဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲက အရှုံးကြောင့် နောက်လှည့်ပြန်ခဲ့ရမှုတွေကို ဒီနေ့မှာတော့ မန်ချက်စတာရဲ့ ညနေခင်းကို အပြာရောင်လွှမ်းပြီး ဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
IT'S THE CHAMPIONS BABYYYY https://t.co/10mfU2aOcN
— Raheem Sterling (@sterling7) May 11, 2021
မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရာဟင်းမ် စတာလင်ကတော့ “ကဲ… အခုတော့ ချန်ပီယံဖြစ်ပြီ ဘေးဘေ”လို့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာမှာ အသင်းရဲ့ တရားဝင်စာမျက်နှာက ပို့စ်ကို Tweet ပြီး အောင်ပွဲခံသွားခဲ့သလို ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရှေးဂစ်ဗင်နဲ့ မီကာ ရစ်ချတ်စ်တို့ကလည်း လက်မနှေးဘဲ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Another One 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/1IsJ0u8yyv
— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 11, 2021
လက်ထောက်အသင်းခေါင်းဆောင် ကွင်းလယ်လူ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားကတော့ နောက်တစ်လုံးရပြီလို့ ဆိုခဲ့ပြီး…
We are the Champions!!! 💙🏆💥@ManCity pic.twitter.com/BfkgEY7u4K
— Ferran Torres (@FerranTorres20) May 11, 2021
ဒီရာသီမှာမှ ဗလင်စီယာကနေ အသင်းကို ရောက်လာခဲ့ပြီး ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ အဖွင့်လှခဲ့တဲ့ ဖယ်ရန် တောရက်စ်ကတော့ We are Champions လို့ အောင်ပွဲခံခဲ့သလို…
Campeones ! Orgulloso de este equipo! Cinco #PremierLeague con #ManCity // Champions! Proud of this team! Five #PremierLeague titles with #ManCity 🏆🏆🏆🏆 🏆 pic.twitter.com/bCTt4rpO6t
— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 11, 2021
ပူပူနွေးနွေး ပင်နယ်တီလွဲပြီး အဆဲခံနေရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆာဂျီယို အဂွေရိုကတော့ သူ့ရဲ့ ငါးလုံးမြောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ရပြီလို့ ဝင့်ကြွားသွားခဲ့တာပါ။
Congratulations lads! Unreal! 🔥💙 https://t.co/BFPQFSFfjF
— Steph Houghton MBE (@stephhoughton2) May 11, 2021
နောက်ဆုံး လေးနှစ်အတွင်းမှာ သုံးကြိမ်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီဆုဖလားအတွက် ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂယ်ရီ လိုင်နီကာကလည်း ဂုဏ်ပြုသွားခဲ့ပြီး မန်စီးတီးအမျိုးသမီးအသင်းခေါင်းဆောင် စတက်ဖ် ဟောက်တန်ကတော့ သူတို့အသင်းရဲ့ ကြိုးစားမှုဟာ တကယ်ပဲ ဒီလောက် ကောင်းခဲ့သလားလို့ အံ့သြချီးကျူးရကြောင်း ရေးသားသွားခဲ့တာတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ZAWGYI: မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းပြဲ ရလဒ္ေတြေၾကာင့္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရမႈေတြဟာ ဒီေန႔မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းရႈံးပြဲနဲ႔အတူ ရပ္တန႔္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီအတြက္ ဆုဖလားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အစ္တီဟတ္ကြင္းရဲ႕ အျပင္မွာ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသလို ၿပီးခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ပြဲက အရႈံးေၾကာင့္ ေနာက္လွည့္ျပန္ခဲ့ရမႈေတြကို ဒီေန႔မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာရဲ႕ ညေနခင္းကို အျပာေရာင္လႊမ္းၿပီး ဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာစီးတီးရဲ႕ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရာဟင္းမ္ စတာလင္ကေတာ့ “ကဲ… အခုေတာ့ ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီ ေဘးေဘ”လို႔ သူ႔ရဲ႕ တြစ္တာမွာ အသင္းရဲ႕ တရားဝင္စာမ်က္ႏွာက ပို႔စ္ကို Tweet ၿပီး ေအာင္ပြဲခံသြားခဲ့သလို ကစားသမားေဟာင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေရွးဂစ္ဗင္နဲ႔ မီကာ ရစ္ခ်တ္စ္တို႔ကလည္း လက္မေႏွးဘဲ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
လက္ေထာက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြင္းလယ္လူ ကီဗင္ ဒီဘ႐ိုင္းနားကေတာ့ ေနာက္တစ္လုံးရၿပီလို႔ ဆိုခဲ့ၿပီး…
ဒီရာသီမွာမွ ဗလင္စီယာကေန အသင္းကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးရာသီမွာပဲ အဖြင့္လွခဲ့တဲ့ ဖယ္ရန္ ေတာရက္စ္ကေတာ့ We are Champions လို႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သလို…
ပူပူေႏြးေႏြး ပင္နယ္တီလြဲၿပီး အဆဲခံေနရတဲ့ တိုက္စစ္မႉး ဆာဂ်ီယို အေဂြ႐ိုကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ငါးလုံးေျမာက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ဖလားကို ရၿပီလို႔ ဝင့္ႂကြားသြားခဲ့တာပါ။
ေနာက္ဆုံး ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ သုံးႀကိမ္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဒီဆုဖလားအတြက္ ေဘာလုံးကြၽမ္းက်င္သူ တိုက္စစ္မႉးေဟာင္း ဂယ္ရီ လိုင္နီကာကလည္း ဂုဏ္ျပဳသြားခဲ့ၿပီး မန္စီးတီးအမ်ိဳးသမီးအသင္းေခါင္းေဆာင္ စတက္ဖ္ ေဟာက္တန္ကေတာ့ သူတို႔အသင္းရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈဟာ တကယ္ပဲ ဒီေလာက္ ေကာင္းခဲ့သလားလို႔ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးရေၾကာင္း ေရးသားသြားခဲ့တာေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ကလော့ပ်ရဲ့ ငိုချင်းချပွဲ (သို့) ယူနိုက်တက် 1-2လက်စတာ ပွဲအပြီး ထူးထူးခြားခြား ထုတ်နုတ်ပြောစရာ ၇ ချက်
ကွင်းထဲ ဝင်ရမ်းတဲ့ ပရိသတ်တွေ Effect ကြောင့် လက်စတာကို ရှုံးခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက်